သင့်သရက်ရွက် မထိခိုက်စေအောင် ဒီလိုမျိုး ကာကွယ်လိုက်ပါ။ - Hello Sayarwon
Dr. Thin Yadanar @ Frances မှ ရေးသားသည်။ ခုလေးတင် တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
သရက်ရွက် ဘေလုံးလို့လည်း လူသိများကြတဲ့ spleen ဟာ ပြန်ရေကြော အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ အကြီးဆုံး ကလီစာတစ်ခုပါ။ သူဟာ ကိုယ်တွင်းမှရှိတဲ့ သွေးတွေ၊ ရေတွေကို ညီမျှအောင် ထိန်းပေးနေရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ ဗိုက်ရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာရှိပြီး တစ်ရှူးနှစ်မျိုးနဲ့ သရက်ရွက်ကိုဖွဲ့စည်းပေးထားတာပါ။
အနီရောင်တစ်ရှူးကတော့ သွေးတွေကို စစ်ထုတ်ရတဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရပြီး အိုဟောင်းသွားတဲ့ သွေးနီဥဆဲလ် တွေကို စစ်ထုတ်ရတာပါ။
အဖြူရောင်တစ်ရှူးမှာတော့ ရောဂါပိုးတွေကို တိုက်ထုတ်တဲ့ T cells and B cells လို့ခေါ်တဲ့ ခုခံအား ဆဲလ်တွေ အပြည့်နဲ့ ဖွဲစည်းထားတာပါ။
ဒီတော့ သရက်ရွက်က သွေးတွေကို သိမ်းထားပြီး စစ်ထုတ်ပေးတယ်။ ကိုယ်တွင်းထဲကို ရောဂါပိုး တွေဝင်လာရင် သူက ဖမ်းပြီး တိုက်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ သရက်ရွက်ကလည်း အခြား ကိုယ်တွင်းကလီစာနည်းတူ အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဒါ့အပြင် အစာခြေတဲ့စနစ်မှာလည်း သရက်ရွက်က မပါမဖြစ် အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။
သရက်ရွက်ကို ဘယ်အရာတွေက ထိခိုက်စေတတ်တာလဲ။ ။
စိတ်ဖိစီးမှုများတာ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာတွေ မစားတာ ၊ ရာသီဥတုအေးတာ တွေကြောင့် သရက်ရွက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးထိခိုက်သွားတာကို Spleen Qi Deficiency လို့ခေါ်ပြီး ဒီရောဂါကြောင့် ဝမ်းလျှောတာ ၊ အစာမကြေတာ၊ ေလထိုးလေအောင့် ဖြစ်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာ တစ်ခုခုကြောင့် ဘေလုံးကွဲတာ၊ သရက်ရွက်ပြဲဆုတ်သွားတာ
သရက်ရွက်ကင်ဆာတွေက သရက်ရွက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို သင့်သရက်ရွက်လေးကျန်းမာစေဖို့ ဘာတွေ လုပ်ပေးသင့်သလဲ။. ။
အားလုံးထဲမှာမှ Spleen Qi Deficiency က ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတဲ့ ရောဂါတစ်ခုပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ သရက်ရွက်လေးကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ ကြည့်ရအောင် ။ ။
၁ ။ အစားအစားများကို ပူပူနွေးနွေးစားပါ။ အသားများကို ကျက်အောင်ချက်ပြီး ပူပူနွေးနွေးစားမှ အစာခြေရတာ ပိုလွယ်လို့ သရက်ရွက် အပေါ်ပိနေတဲ့ ဝန်တွေ လျော့သွားပါလိမ့်မယ်။
၂ ။ အစားမစားခင် ( ဒါမှ မဟုတ်) စားနေစဉ်အတွင်းမှာ ဂျင်းပြုတ်ရည်ထည့်သောက်တာတို့၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေဖြစ်တဲ့ ငရုတ်ကောင်းတို့၊ သစ်ကြပိုးခေါက်တို့ဟာ သရက်ရွက်ရဲ့ အစာခြေတဲ့ စနစ်ကို ပိုအားကောင်းစေပါတယ်။
၃ ။ အစားကိုဖြည်းဖြည်းချင်း ဝါးစားပါ။ အစားကို ဖြည်းဖြည်းချင်း းဝါးစားတာကြောင့် အစာတွေ ပိုကြေညက်သွားမယ့်အပြင် ဗိုက်ပြည့်ပြီဆိုတဲ့ အာရုံကြော အချက်ပြစနစ် ဦးနှောက်ကို ရောက်အောင် သွားဖို့ အချိန်ပေးရာလည်းရောက်လို့ အများကြီးလည်း အစားမိတော့ပါဘူး။
၄။ အစားကို နည်းနည်းနဲ့ အကြိမ်များများစားပါ။ တစ်ခါတည်း ပြည့်အင့်နေအောင် စားတာထက် နည်းနည်းချင်းစီ အကြိမ်ရေများများစားတာက သင့်အစာခြေစနစ်ကို ကူညီရာရောက်ပါတယ်။
၅ ။ ကစီဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအနှံတွေကို စားပေးပါ။ ရွှေဖရုံသီး၊ ကန်စွန်းဥ၊ မုန်လာဥနီ ၊ ပဲ အမျိုးမျိုးတို့ဟာ ကစီဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်တွေဖြစ်ပြီး အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် သင့်အစာခြေစနစ်ကို အကူအညီပေးမှာ အသေအချာပါ။
၆ ။ အချိုစားများလွန်းတာ ဆီးချိုဖြစ်စေရုံသာမက သင့်မုန့်ချိုအိတ်ကိုရော၊ သရက်ရွက်ကိုရော ထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိုလျှော့စားပါ။
ကဲ ဒါတွေကတော့ သရက်ရွက်မှာအများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ Spleen Qi Deficiency ကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
https://www.gaia.com/article/8-ways-support-your-spleen Accessed Date 29.12019
https://www.livescience.com/44725-spleen.htmlAccessed Date 29.12019
https://www.changeyourenergy.com/blog/1592/5-ways-to-reduce-stress-enhance-spleen-function?fbclid=IwAR0F3RhJkrizgWMNde1GGPSUZGOa6ifeGqFocdIgyEtK4d76vpmXIFA7Cz8Accessed Date 29.12019
ထမင်းကြမ်း အပါအဝင် လုံးဝပြန်နွှေးမစားသင့်တဲ့ အစားအစာ (၆) မျိုး